Toriteny 06 aprily 2014 | FJKM Amboniloha
Toriteny 06 aprily 2014
Ezekiela 18 :23-32 / Marka 5 :35-43 / Romana 6:1-7
“Dia nihomehy azy fatratra ny olona” Marka 5:40
Toa te hiteny hoe iza moa ilehio no manana fahefana amin’ny fahafatesana ?
Andalan-tsoratra Masina omena antsika anio, mampahafantra ahy sy ianao indray fa manana fahefana feno amin’ny fiainanao ny Tompo hanafaka anao amin’ny olam-piainana; eny hatramin’ny fahafatesana aza.
Manasa anao hanaraka tsara ny lesona ampitain’ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny tantaran’i Jairo sy zanany vavy tokana.
1- Nanana finiavana hitady an’I Jesoa i Jairo manoloana ny olam-pianany
Mpitantana ny Synogoga (toeram-pivoriana) no andraikitra tànan’i Jairo eo anivon’ny fiaraha-monina. Raha narary mafy ny zanany vavy tokana, hevitra tonga tao an-tsainy voalohany ny hitady an’I Jesoa satria fantany loatra fa mahay fahagagana Jesoa noho ny fahitany sy ny fahenony ny fampianarana ataon’I Jesoa isan’andro ao amin’ny Synagoga ; na dia tsy tena mpino mafana fo aza i Jairo ; dia nino tamin’ny fony fa any amin’ny Jesoa no vahaolana ny amin’ny zanany marary mafy.
Lesona : Tsara ny mifankazatra amin’I Jesoa amin’ny fiainana andavan’andro . cf Jairo mahita an’I Jesoa amin’ny Synagoga izany hoe ny fankanesantsika aty am-piangonana koa no mamolavola antsika hanana fifandraisana akaiky amin’ny Tompo.
2- Mpiara-miasa amin’Andriamanitra i Jairo
Ny faneken’i Jairo hanokatra ny Synagoga ho amin’ny asan’Andriamanitra dia mariky ny maha mpiara–miasa amin’Andriamanitra Azy. Hitan’ny Tompo ireny na dia atao hoe farany bitika aza, izay tsy noeritreritin’ny Jairo ho zava-dehibe akory. Raha nitabataba ny vahoaka hoe maty ny zanakao, dia toa te hanaraby azy hoe, inona no mbola handanianao andro mitady an’I Jesoa any ; fa ny zanakao aza efa maty ?
Lesona : Manao ahoana izaho sy ianao eo amin’ny fandraisana andraikitra amin’ny asan’Andriamanitra ? Ekena fa misy ny olana manjary ho sakana; tsarovy fa efa fanaka voafidy ho fitondrana ny anaran’Andriamanitra isika. Raha mety hanao ny asany ianao; aza manahy fa ny Tompo no efa mialoha lalana sahady amin’izany fikasana tsara izany.
3- Nanolotra ny olany eo an-tanan’I Jesoa i Jairo
Na inona na inona zava-tsarotra lalovana eo amin’ny fiainana, aretina, olana eo amin’ny ankohonana sns, …. endriky ny fahafatesan ireny, nefa dia hain’I Jesoa no manangana anao ao anatin’ireny raha tena matoky ka atolotra Azy ny zava manahirana anao.
Nanome fianarana tsara ho antsika i Jairo, ny fifankazarany tamin’ny Tompo, ny fanekeny ho mpiara-miasa amin’Andriamanitra, ary ny finoana nananany fa mahay ny zavatra rehetra Jesoa ary tena nampihariny tamin’ny fiainany izany dia, nandraisany valim-pitia lehibe dia ny famonjena azy tao anatin’ny fahafatesana.
Mandehana ary ka mba mianara toy izay nataony koa dia ho hitanao ny voninahitr’Andriamanitra hamonjy anao amin’ny endrim-pahafatesana samihafa.
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 11 avril 2014